KIVSYAKI EE BEERTA: SIDA LOO TAKHALUSO CAYAYAAN XAASIDNIMO - SOOSAARKA DALAGGA
Kivsyaki: xakamaynta firfircoonida ra'yiga
Kivsyaki - mid ka mid ah cayayaanka ugu muhiimsan ee ku nool dalka; Sida looga takhaluso, ayaa looga doodi doonaa maqaalka.
Tani waa magaca caamka ah ee saddexda amar ee fasalka laba-cirifoodka, oo tirinaya qiyaastii 30,000 nooc.
La kulan cayayaanku
Cayayaankaasi waxa uu leeyahay jidh dhafan oo dhuuban, oo leh labada lugood. Dhererka dufanku wuxuu u dhexeeyaa 7 ilaa 15 mm. Iyadoo ku xiran nooca iyo da'da, Kanadiyada waxaa laga yaabaa in ay midabyo kala duwan: jaalaha, cad, madow, saytuun, brown. Kivsyaki jiifay ukunta carrada. Xaydhuhu wuxuu ku kala duwan yahay dadka qaangaarka ah ee addinka yar. Waxay ku nool yihiin lakabyada sare ee carrada, iyagoo sameeynaya marinnada dhirta. Hoyga ku yaal godadka jiirka, dhagxaan, jilif geedeed. Way jecelyihiin qoyaanka, sidaas darteed waxay jecel yihiin in ay degaan dalagyada koray dhulka.
Ma taqaanaa? Qaarkood waxay ku jiraan xeryaha guriga, sida xayawaan dabeeci ah. Noocyada ugu caansan ee isticmaalka gudaha waa digaagga badda ee weyn ee Afrika, dhererkoodu wuxuu gaaraa 30 cm.
Waxyeelo ka soo jeeda dhinaca xagasha
Cirbadaha ayaa waxyeelo u geysta astaamaha. Si kastaba ha noqotee, way ka baxaan ciidda, si kastaba ha ahaatee, haddii ay waxyeeleeyaan dhirta, waxay u badan tahay inay u dhintaan, sababtoo ah waxay ku tumanayaan xididada-caleenta, iyo nafaqooyinka hadda lama heli karo. Dadka, kipsyak waa halis sababtoo ah waxay bixisaa sir ah oo sababa gubashada maqaarka.
Cayayaanka sida qoyan jilicsan, caarada barnkeed, caarada caarada, caarada, caleen, weevil, nematode, wireworm, aphid, iyo baradhada baradhada Colorado waxay sababtaa waxyeelo weyn oo loo geysto dhirta, sidaas darteedna yareeya waxsoosaarkooda.
Kooxda halista ah
Intooda badan waxaa lagu baranayaa strawberries. Waxay sidoo kale cunaan khudradda xididka: baradhada, radishes, xididdo, radishes, bagalka. Intaa waxaa dheer, waxay ku quudiyaan tufaaxa, tamaandhada, qaraha waaweyn, iyo sidoo kale dalagyada gudaha ee la koray gudaha, cuno abuurka biqil iyo geedo yar yar.
Dhibaatada leh laf-dhabarka waxaa fuliya habab badan, tixgelin iyaga hoos.
Sida qiyaasta ka hortagga ah, waxaa lagu talinayaa xilliga dayrta goor dambe, marka uu dhaxan bilaabmo habeenkii, si uu u qodo aagga. Ka dibna cayayaanka kulaylka-jecel, oo ay ku jiraan jameecooyinka, way dhiman doonaan. Waa inay sidoo kale ka baxdaa beerta cawska iyo alaabooyinka xad-dhaafka ah si aanay u haysan hoyga loogu talagalay qayb-bixiyeyaasha. Strawberries waxaa lagu talinayaa in la xiro ilaa taageerada, sidaa daraadeed Kittiks uma tagaan beeraha.
Waa muhiim! Haddii ciidda hodan ku ah nafaqooyinka, humus iyo humus si joogto ah loo soo bandhigo, suurtagalnimada in badmaaxadu ka baxdo ciidda oo burburiso dalaggu waa mid aad u yar.
Waxaa jira qaar ka mid ah farsamooyinka ururka iyo ka hortagga, loogu talagalay in lagu beero khudradda alwaaxa algae:
isticmaalka qashinka cagaarka iyo digada, waxay xakameyaan habka bayoolojiga;
beerashada dayrta goor dambe iyo beerashada guga hore waxay gacan ka geysataa xakamaynta reerka.
Ma taqaanaa? Sannad kasta, qaangaarka ayaa cusbooneysiiya hubkiisa oo wuxuu ku darayaa hal qayb dheeraad ah. Sidaa daraadeed, tirada lugaha ayaa si joogto ah u kordheysa 100 ilaa 400 laba-labo.
Habkani waa midka ugu caansan. Saldhigyada ayaa la quudin karaa xididada loo yaqaan 'insecticide-treated'. Si kastaba ha ahaatee, habkani waa mid dhib badan, maxaa yeelay waxaa lagama maarmaan ah in si joogta ah u cusbooneysiiso, qoyaan qoyan, lacagta jimicsiga kitsyakov. Mararka qaarkood habkani waa mid dhib badan adigoo ku rakibaya weelasha halka ay bartilmaameedku ku soo baxaan, waxaa lagama maarmaan ah in la nadiifiyo hoygooda waqti ka waqti. Nidaamka caynku waa fiican yahay marka Rednea ay degto aag kooban; haddii ay jiraan dhowr degmo, kadibna waxay noqoneysaa mid aan waxtar lahayn.
Kipsyaks waxay leedahay qolof jilicsan oo aad u adag, sidaas darteed ka shaqeynta kimikalka ma bixiso boqolkiiba 100 damaanad ah burburintooda. Laakiin cayayaanka qaarkood, badanaa dirxiga, waxay ku dhinta shan maalmood gudahood. Diyaargarasyada caanka ah ee loogu talagalay processing: "Karate", "Actofit", nematicides. Waxtar badan iyo ecological waa daaweynta xal milan oo cusbo ah.
Waa muhiim! Isticmaalka daroogooyinka ku saabsan miraha iyo jirriduhu ma bixiyaan natiijooyin wanaagsan.
Maandooriyeyaasha waxaa laga dalbadaa ciidda marka ay ka baxaan ilaalada Asiya oo ka baxa hoyga. Waxay ku dhacdaa waqtiga fiidka
Qodobkani wuxuu ku saabsan yahay, in ay khatar u yihiin dhirta iyo bini-aadamka, iyo tallaabooyinka looga hortagayo iyaga ayaa loo tixgeliyey.
Si loo xakameeyo cayayaanka waxtar leh, daawooyinka soo socda ayaa loo isticmaalaa: Nemabakt, Medvetoks, Aktofit, Kinmiks, Brunka, Calypso, Muravyed, Abiga-Peak, Iskrataya golaya iyo Bitoxibacillin ".